Angola, Sina: Miresaka Momba Ny Fampandrosoana Vaovao “Tanàna Maty” Ireo Mpampiasa Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Angola, Sina: Miresaka Momba Ny Fampandrosoana Vaovao “Tanàna Maty” Ireo Mpampiasa Aterineto	Voadika ny 20 Jolay 2012 14:27 GMT
Zarao: Toy ny firenena Afrikana maro, dia zara raha mahazo $2 isanandro ny vahoaka ao Angola. Nanao dingana amin'ny andrana ho fampandrosoana ny firenena ny governemanta ao Angola mba hahafahany hifaninana amin'ny firenena hafa manerana izao tontolo izao. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nisafidy ny hampiroborobo ireo tranobe ao Kalimba, eo ho eo amin'ny 30km ivelan'i Luanda, renivohitra.
Nampiditra orinasa Sinoa iray ny governemanta, China International Trust and Investment Corporation, mba hanao ny asa ka aloa amin'ny alàlan'ny fanomezana ny harena an-kibon'ny tanin'ny firenena, dia ny solika.
Ireo tranobe vaovao ao Nova Cidade Kalimba. Sary nahazoana alàlana tamin'ny constructiondigital.com
Vitan'ireo orinasa Sinoa antsakany sy andavany ny asa ary nahatsangana tranobe 750 misy rihana 8 ka 75000 Euros ny vidin'ny iray amin'izy ireo izay tsy ho takatry ny ao an-toerana velively na afaka 20 taona aza.
Mieritreritra ny bilaogera Francois-Xavier fa tokony nampiasain'ny governemanta hampandrosoana ny orinasa ao an-toerana ny solika, izay tokony hanome asa ho an'ny olom-pirenena:
Nahoana moa ny tombony azo avy amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany no natao ho an'ny banky sy ny orinasa maro rantsana ihany! Tena somary henatra ho an'ny governemanta Afrikana ihany mandeha aminà hetsika tahaka izany. Tokony entina hampandrosoana ny orinasa mavesatra ny vola miditra avy amin'ny solika sy ny harena an-kibon'ny tany, ilay tena herin'ny toe-karena ao Afrika ary mampalahelo fa hita ho tena tsy ampy tokoa ao Afrika. Hamela malalaka ny fahazoana asa sy ny fizaràna ara-drariny ny harena izy ity ary hatramin'ny fiakaran'ny fahefa-mividin'ireo Afrikana be herim-po. Tsy ilain'ny Afrikana ny rendrarendra. Lainga be miharihary ny fampielezana izany, izay nataon'ny mpampahalala vaovao tandrefana miara-miasa amin'ireo Afrikana vitsy an'isa mpanao kolikoly.
Raha niresaka momba ny vidin'ireo tranobe izy dia nilaza fa:
Afaka 20 taona mahery izany vao voaloa raha ho anà lehilahy iray manambady sy manana zanaka miisa 4. Hisy olona mitapy iray hanontany hoe: ” Nahoana moa izy no hanan-janaka 4?” dia ho valiko izy hoe: “Ndeha mankany amin'ny ***”. Aza tarihana ho any amin'ny Krizinareo mihodinkodina any i Afrika.
“This is Africa” no miezaka manazava hoe nahoana no misy tanàna maty any Sina sy Angola:
Ho mora ny mamintina ny tena anton'ity hadalàna ity ao anatin'ny teny tokana monja, tsy inona akory fa ny: Kaomionisma! – na amin'ny teny miisa efatra: “Kaomionisma sy Marxisma-Leninisma” – hita rahateo fa ny hany antoko tokana mitondra ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia mifikitra amin'ny fomba ofisialy amin'ireny foto-kevitra ara-tsosialy sy ara-politika ireny, kanefa miteny amiko ny feon'ny fieritreretako fa be mihoatra noho izay hitan'ny maso ny ao ambadik'ity fananganana tanàna mialoha ny fotoana ity.
Voaporofon'ny tantara fa saiky manerana ny firenena tsirairay eto amin'izao tontolo izao izay nahazoan'ireo hetsika revolisionera sosialista fàka, ary ambonin'izany rehefa fehezin'antoko tokana ny vahoaka, dia misy hatrany ny fitsinjarana diso toerana ny renivol (halatra araka ny lalàna) ataon'ny governemanta mifehy.
Ka inona avy ary izao no paikady marobe nataon'ireo ‘Mpifehy ny Haizina’ ireo tamin'ny nananganana ireto foto-drafitrasa marobe tsy misy mipetraka ny ankamaroany izay mijoro any amin'ny toerana hafahafa tena lavitra any, indrindra fa ireo firenena izay eo ambany vahohon'ny hery Kaomionista? Ireny tanàna vaovao ireny izay miaraka amin'ny làlana vita tara, arahan'ny bozaka maitso mavana, sy ireo tranobe mitandahatra izay azo antoka fa ho an'ny tombontsoan'ireo sarangan'ny mpiasa, satria ambony dia ambony noho izay takatry ny fianakaviana iray amin'ny sarangan'ny mpiasa ny vidin'ny iray amin'ireo tranobe. Ny fanambaràn'ny kaominista milaza hoe, “… misolo tena ny sarangan'ny mpiasa izahay,” dia tena vongan-diky tsy misy dikany tanteraka!
Manoratra ny bilaogy UChinaTravel:
Azo hinoana fa ity no iray amin'ireo tetikasam-pananganana trano lehibe vaovao manerana ny kaontinanta Afrikana.
Na izany aza anefa, ny antony nahatonga ity tantara ity ho nahasarika ny saina dia ny fametrahana ity fampandrosoana vaovao ity ho “tanàna maty”, satria efa ho ny 12.355 hektaran'ilay tany no tsy misy na inona na inona. Efa ho feno herintaona izao no naroso teo amin'ny tsena ny manodidina ny 2.800 amin'ireo tanàna ireo, 220 monja no lafo tamin'izany.
Nampakatra dikantein'ireo fanehoan-kevitra tamin'ny fiteny Shinoa avy amin'ireo Shinoa mpikiraira aterineto tao amin'ny tranokala chinaSMACK i Fauna. Ity ambany ity misy santionany tamin'ireo fanehoan-kevitra:
Nilalao/nanangom-bola tamin'ny tsenan'ny fanorenan-trano hatraty Afrika ve ireo andian'olona vendrana tsy alehany ireto?
[Lehiben'ny Akademia Shinoa ao amin'ny Birao Fikaroana momba ny Siansa Sosialy any Afrika] Miteny i He Wenping fa, “tetikasam-pananganana iray hahazoan'ny rehetra tombontsoa ity, hatramin'ny fototry ny firoborobon'ny toekarena Afrikana”. ＝＝ Toa efa fandre izany!
Ao an-toerana [ny firenena] dia mitohy hatrany mampandoa hetra sy mampakatra nyfe- taona handehanana misotro ronono sady mandanilany tsy misy fotony vola any ivelany!!! Ry Shina, tena reharehako ianao, tsapako izany rehereha izany!!!
Natokana hanampiana ny fivoaran'ny toe-piainan'ny olona ny toerana azo honenana —— Na izany ny zava-misy any tsy fantatro, fa ny eto dia natao hitrandrahana anay fotsiny [amin'ny fampitrosàna]!
Andianà mpandraharaha lany fanahy izay rehefa avy namitaa ny olona nanodikodina ny volany tao Shina no nandeha taty Afrika hanimba ny endriky ny vahoaka Sinoa.
Na izany aza, mpampisa aterineto iray no niady hevitra momba ny fampiasàna ny fiteny hoe “ghost town” na “tanàna maty”:
Amin'ity indray mitoraka ity ry BBC dia tena dio tanteraka ianareo, firaisa-monina no dikan'ny “ghost town” na “tanàna maty” amin'i Shina izay na dia olona iray aza tsy mipetraka any , ary tsy maninona na misy olona vitsy aza monina ao amin'ity toeram-ponenana vaovaon'ny distrika ao Angola ity, noho izany ahoana mihitsy ry zalahy no hahafahanareo miantso azy ity hoe: “ghost town” na ” tanàna maty”????
Moa ve ny vahoaka Angole afaka mampiasa ireto tranobe ireto, izay natsangana tamin'ny fampiasàna ny volan'ny firenena sy ny harena an-kibon'ny tany?
Vakio amin'ny teny Português, Español, русский, Italiano, Français, Català, 繁體中文, 简体中文, English
Afrika MaintyAzia AtsinananaAngolaShina
FampandrosoanaFifandraisana iraisam-pirenenaMediam-bahoakaToekarena sy Fandraharahàna